A Na-ahụ Mgbasa Ozi Vidio Gị? | Martech Zone
Ihe kariri ọkara nke mgbasa ozi niile na ibe vidiyo na-ahụ n'ofe weebụ, ọnọdụ siri ike maka ndị na-ere ahịa na-enwe olileanya iji uru nke ikiri vidiyo na-eto eto gafee ngwaọrụ. Ọ bụghị akụkọ ọjọọ niile… ọbụlagodi vidio vidio nke ụfọdụ gere ntị ka nwere mmetụta. Google nyochara nyiwe mgbasa ozi DoubleClick, Google na Youtube ka ha gbalịa ịchọpụta ihe ndị na-enyere aka ịchọpụta ngosipụta nke mgbasa ozi vidiyo ndị ahụ.
Gịnị ka a pụrụ ile anya dị ka nke a pụrụ ịhụ anya?
A na-ahụ mgbasa ozi vidiyo mgbe opekata mpe 50% nke pikselụ nke ad ahụ na ihuenyo maka opekata mpe sekọnd abụọ, dị ka Kọmitii Mgbasa Mgbasa Ozi (MRC) kọwara, yana mmekọrịta na Bureaulọ Ọrụ Mgbasa Ozi mmekọrịta.
Ihe ndị metụtara mmetụta na-emetụta omume gụnyere omume ndị ahịa, ngwaọrụ, nhazi peeji, oke ọkpụkpọ, na ọnọdụ nke mgbasa ozi na ibe. Lelee nke Google akụkọ nyocha zuru ezu nke sitere n'ike mmụọ nsọ ihe omuma a. Ọ gụnyere ihe mere eji mee nyocha ahụ, usoro, ịhụ mba anya, yana nkọwa ndị ọzọ gbasara nchọta.
Tags: google +IABBureaulọ Ọrụ Mgbasa Ozi mmekọrịtaNdị Nchịkọta Mgbasa Ozimrcvideo ad viewabilitymgbasa ozi vidiyoyoutubeyoutube na mgbasa ozi
Mee 29, 2015 na 2: 05 PM
Dị jụụ! Ihe omuma gi na-achikota akuko mbu nke google nke oma. Achọrọ m ịmata ihe ụlọ ọrụ ozi ị na-arụ ọrụ?
Mee 31, 2015 na 1: 49 AM
Na agbanyeghị, ọ bụ Google mere infographic a n'ime. Otú ọ dị, DK New Media na-eme ihe omuma ihe omuma. Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ụfọdụ.